Ny lokon'ny zavakanto dia miloko amin'ny fomba filaharana - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Mampiavaka ny diabe ny zavakanto
Nandritra ny volana martsa maneran-tany, saika ny asa rehetra dia maro ny fanehoana kanto no nanomboka nampihomehy azy ireo, raha tsy izy no fiara lehibe amin'ny fitenin'izy ireo.
Izahay dia nanao famintinana voalohany ireo hetsika ara-javakanto tamin'ny diabe tao amin'ilay lahatsoratra Ny tselatra amin'ny zavakanto tamin'ny martsa manerantany.
Ao anatin'izany no hanohizantsika ny fitsangatsanganana ireo fanehoana zavakanto aseho mandritra ny dia amin'ny volana martsa manerantany.
1 Any Afrika, ny sary sy ny dihy ary ny rap
2 Ny hoso-doko Lola Saavedra sy hoso-doko ho an'ny fandriampahalemana
3 Zavakanto ao amin'ny Ranomasina Mediterane an'ny fandriampahalemana
4 Tany Italia, fandraisana an-tanana maro
5 Raha nandalo an'i Amerika Atsimo, nibodo toerana afovoany ny zavakanto
6 Tany am-pandihizana tany Azia
7 Ho an'i Eropa, ny Bel Canto
8 Tapitra ny volana martsa tany Madrid
9 Ary koa amin'ny faran'ilay diabe
Any Afrika, ny sary sy ny dihy ary ny rap
Amin'ny ankapobeny, ny andalana manerana an'i Afrika amin'ny World World 2nd, andiana mpaka sary nandrakotra ny hetsika rehetra. Ny fifalian'ny fahatanorana sy ny fahalalana tsara dia nanazava azy ireo.
Tao anatin'ny tontolo iainana mahasalama camaraderie sy amin'ny fanentanana ho an'ny tanora dia mpaka sary sy mpaka sary iray no nanarona ny faha-2 martsa maneran-tany ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatoniana teny an-dàlana mankany Maraoka.
Rehefa miditra ao Senegal, tao Saint Louis, ny tolakandron'ny 26 Oktobra, ny foiben'ny Don Bosco, dia nisy hetsika iray nanaovana ny fanolorana ny Martsa maneran-tany, ary ny lafiny ara-kolotsaina dia ny fisoloan'ny andian-tafika teolojika Juvep, ny fitsabahana nataon'ny Jeneraly Kheuch sy ny slamero Slam Issa izay namelona rivo-piainana.
Ny hoso-doko Lola Saavedra sy hoso-doko ho an'ny fandriampahalemana
Ny mpanakanto plastika Coruña Lola Saavedra dia miara-miasa amin'ny kanto amin'ny "Andiany faha-2 martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatsiarovan-tena" manao asa izay manambara ny soatoavin'ny fandriampahalemana, firaisankina ary tsy fahatomombanana.
Ny vanim-potoana tamin'ny volana martsa dia nisokatra ny hetsika ara-kanto A Coruña, Espaina antsoina hoe MPANOMPOANA HO AN-TOKONY SY FIVORIANA, A Coruña.
Zavakanto ao amin'ny Ranomasina Mediterane an'ny fandriampahalemana
Amin'ny lafiny hafa dia niparitaka sy noraisin'ny praiminisitra maritimaly tamin'ny 2 martsa maneran-tany ny zavakanto ho an'ny fandriampahalemana. Ranomasina Mediterane Mediterranean.
Amin'ny lafiny iray, ny Bamboo, ilay sambo izay nanatanterahana ny hetsika dia nitondra santionany amin'ny sarin'ireo fandriam-pahalemana nataon'ireo ankizy an'arivony ao anatin'ny fandraisana andraikitra Ny loko fandriampahalemana.
Amin'ny lafiny iray, any amin'ireo seranana izay tonga dia nandray anjara tamin'ny hetsika samy hafa izy ireo niaraka tamin'ny zava-kanto niaraka taminy.
Araka izany, ao Marseille, ao amin'ny Thalassantè: "Mihira fihavanana, mihira miaraka rehefa mihaino isika ka afaka mampiray feo. Ary izao no fomba anaovantsika azy: mihira sy miresaka ary mihaino ny zavatra niainan'ny hafa isika. ” Ao isika rehetra dia mandray anjara mihira ny 31 Oktobra amin'ny 2020.
Tany Barcelona, ​​tamin'ny hetsika natao tamin'ny sambo "Preace Boat" izay nandehanan'ireo sisa velona tamin'i Hiroshima sy Nagasaki dia nitety an'izao tontolo izao nampiely ny hafatra ho an'ny fandriampahalemana sy tamin'ny baomba niokleary, mety ho tsapa ihany koa ny zavakanto:
Teo no naseho ny sarin'ireo zanaky ny hetsika "Colors of Peace", La Hibakusha, Noriko Sakashita, dia nanomboka ny hetsika tamin'ny famakiana tononkalo "fiainana androany maraina", niaraka tamin'i cello nosoratan'i Miguel López, nilalao ny "Cant dels Ocells ”nataon'i Pau Casals, izay nampientam-po tao amin'ny mpihaino. Ka izany no ahitantsika azy amin'ny lahatsoratra Fikambanana ICAN ao amin'ny sambo Peace Peace.
En Sardinia, ireo tantsambo Bamboo, afangaro amin'ireo naman'ny tambajotra "Migrant Art", izay "Mampiavaka antsika ny kofehy vita amin'ny landy izay mampiray antsika amin'ny tambajotra tafiditra amin'ny fientanam-po."
Farany, ny Ranomasina Milamina Fandriampahalemana, teo anelanelan'ny 19 sy 26 novambra, manidy ny tongotra farany amin'ny dia.
Any Livorno, misy fivoriana atao any amin'ny Old Fortress:
"Isan'ireo mpitsidika dia i Antonio Giannelli, filohan'ny Fikambanana Colours for Peace, izay iverenantsika ny sombin'ny Peace Blanket sy ny famolavolana 40 an'ny fampirantiana Colours of Peace, izay mihoatra ny 5.000, izay manana niaraka taminay namakivaky ny Mediterane.
Notantarain'i Antonio ny zava-niainany tao amin'ny Association, izay miorina ao amin'ny Sant'Anna di Stazzema, tanàna izay nisy 1944 no novonoin'ny Nazia tamin'ny 357, 65 tamin'izy ireo.
Tany Italia, fandraisana an-tanana maro
Tany Italia izahay dia afaka nanatrika hetsika maro izay misy ny firaisankina sy ny zavakanto milay no protagonista.
Fiumicello Villa Vicentina, dia nanentana hetsika marobe izay nasongadin'ny hetsika ara-kanto:
Tamin'ny zoma 06.12 ny fampisehoana mozika "Magicabula" avy amin'ny Association Cultural "Parcè no? ... ny miavin'ny Noely dia miafina ao amintsika tsirairay ...
Isan'ireo hetsika fampiroboroboana tamin'ny volana martsa manerantany, fampisehoana teatra.
Ny asabotsy 14.12 tamin'ny 20.30 dia nanatontosa ilay orinasa teatra Lucio Corbatto avy any Staranzano: Nahafinaritra anay niaraka tamin'i Campanilismi, hetsika efatra tsy manam-paharoa nataon'i Achille Campanile.
Ny Tarika Titas Michelas dia manentana an'izao tontolo izao nandritra ny Fankalazana Epiphany
Tamin'ny 6 Janoary dia nanolotra ny fiarahamonina Fiumicello Villa Vicentina ny Banda Tita Michelàs tamin'ny fivoriambe faha-2020.
Niditra tao amin'ny efitrano Bison: tao anatin'ny hetsika Krismasy dia naseho ny hatsikana "Serata omicidio" sy "Venerdì 17".
Ny sabotsy 21 desambra sy alahady 22 desambra 2019, tao amin'ny efitrano "Bison" ao amin'ny Fiumicello Villa Vicentina, amin'ny 20:30 p.m. fampisehoana teatra izay nataon'ny orinasa Philodramatic
Ary farany, tao anatin'ny "fotoana tsara tiana hizarana any Fiumicello":
Tamin'ny sabotsy lasa teo, 22/02/2020, niaraka tamin'ny Scouts of Fiumicello izahay, manoratra sy mandoko ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana izahay.
Ny sabotsy 22/02/2020 ny tolakandro dia nihaona taminay teo amin'ny faribolana ny mpanamory Fiumicello 1: niresaka momba ny fandriampahalemana sy tsy fahatomombanana izy ireo. Miara-mihira isika rehetra.
Ho an'ny fandriampahalemana dia samy nanoratra tamin'ny sary izay nosoloany ny tenany ny tsirairay.
Ary, any Vicenza, "Mozika sy teny fiadanana" ao Rossi:
Roapolo andro teo ho eo talohan'ny World Martsa ho an'ny Fandriampahalemana sy ny tsy Herisetra dia nandalo an'i Vicenza, ny komity fampiroboroboana Vicenza, niaraka tamin'ny fiaraha-miasa nataon'ireo mpanakanto Pino Costalunga sy Leonardo Maria Frattini, nokarakaraina tamin'ny zoma 7 febroary, 20.30 hariva, tao amin'ny Institut "Rossi" (tamin'ny alàlan'ny Legione Gallieno 52), ilay fampisehoana "Music sy Tenin'ny Fiadanana".
Mampalahelo fa tamin'ny fivoahan'ny COVID-19 ary ny fepetra fanakodia dia nanakana ny hanafoanana ny Pandigaly, tsy maintsy nofoanana ny hetsika rehetra nokasaina hamakivaky ny volana martsa faha-2.
Misy ny fanekena hatao amin'ny fararan'ity taona ity.
Hahita anao tsy ho ela, Italia!
Raha nandalo an'i Amerika Atsimo, nibodo toerana afovoany ny zavakanto
En Ekoatera, Ny fikambanana Fine Arts Foundation sy izao tontolo izao tsy misy ady ary tsy misy herisetra Fikambanana nanatevin-daharana mba hanolotra voalohany Fampirantiana kanto Guayaquil ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana. Mpanakanto 32 eo anelanelan'ireo teratany sy vahiny no mandray anjara amin'ity hetsika ity izay nosokafana tamin'ny 10 desambra 2019
En Kolombia, teo anelanelan'ny 4 sy 9 novambra nanatrika ny fahatokanana sary sokitra maro izahay.
Tamin'io andro io ihany, tao amin'ny Universidad Bogotá Bogota Colombia, dia notokanana ny sary sokitra Fifohazana sy fahalalahana an'ny Master Ángel Bernal Esquivel.
Ny gadona iray an'i Silo dia notokanana, Mario Luis Rodríguez Cobos, mpanorina ny hetsika Universalist Humanist Movement. Ao amin'ny hetsika dia Rafael de la Rubia, ilay mpanao sculptor, solontenan'ny MSGySV ao Kolombia ary manam-pahefana.
En PeruAo anatin'ny asa ara-javakanto-kanto Ny 17 desambra, tao Arequipa, dia nisy ny lanonana ara-kolotsaina kanto.
Ary tamin'ny 19 Desambra, nitohy ny hetsika ary tao Tacna, ny fandraisana ho an'ny ekipa Base amin'ny andiany faha-2 tamin'ny volana martsa lasa teo dia natao niaraka tamin'ny isa artista tao amin'ny toerana Michulla.
Rehefa mandalo ianao Arzantina, ny ekipa Base, ao amin'ny Valan-tantara sy Fandinihana tantara any Punta de Vacas, dia noraisin'ny amboarampeo avy amin'ny tanàna akaiky azy. Hira fifaliana feno amin'ny finiavana tsara indrindra.
Nandray anjara tamin'ny fanokafana ny "Wall" tsara tarehy ihany koa izahay. Rafael sy Lita dia nanolotra ny Mural nataon'ireo namana sasany avy ao amin'ny La Plata Community.
Rafael de la Rubia dia niresaka momba izany fa efa nisy ireo "famantarana" hafa izay niaraka tamin'ny volana martsa, toy ny tany Kolombia, izay misy ny Plaza iray mitondra ny anaran'i Silo ary ny toeran'i Silo dia notokanana.
En Shily, nandray anjara ny mpivarotra misaintsaina, diabe sy fety sambatra:
Ny volana martsa tamin'ny alàlan'ny varotra manodidina dia nitaky ny fanovana lalina ny andrim-panjakana sy ny mponina.
Ny fety, fampisehoana fifaliana mifantoka mba hampisehoana ny fanahy izay tsy maintsy anaovana ny fitakiana rehetra, fifaliana manadio ny ho avy amin'ny tsy fandriampahalemana.
Tany am-pandihizana tany Azia
Anisan'ireo hetsika hafa, any Asia, ao amin'ny India, tany am-piandohana, mpivarotra dia nandinika ny dihy mahafinaritra izy ireo.
Ho an'i Eropa, ny Bel Canto
En Frantsa, asa samy hafa no nomanina miaraka amin'ny fihirana ho protagonista.
Tamin'ny 7 Febroary 2020 tany Rognac, ny fikambanana ATLAS dia naneho fampisehoana fanoherana ara-javakanto misy ny lohateny hoe "Afaka isika”, Ao anatin'ny rafitry ny volana martsa maneran-tany ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana.
Ary tamin'ny Augbagne dia nitazona "Mihira ho an'ny rehetra".
Ny zoma 28 febroary 2020, tao anatin'ny rafitry ny Diabe faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fanarahan-dalàna, alina iray nihira tsy nisy fanavaozana natao tao Aubagne, misokatra ho an'ny rehetra.
Ity hetsika ity dia nokarakarain'ny fikambanana EnVies EnJeux.
Mihira ho an'ny rehetra ao Aubagne aho: https://theworldmarch.org/canto-para-todos-y-todas-en-aubagne/
Tapitra ny volana martsa tany Madrid
Ny 8 martsa lasa teo ny marika eran'izao tontolo izao ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fanarahan-dalàna tao Madrid.
Eo anelanelan'ny 7 sy 8 martsa, ny hetsika ataon'i fanakatonana ny volana martsa tany Madrid.
Amin'ny faha-7 maraina amin'ny maraina Ivontoerana kolontsaina del Pozo ao amin'ny faritra Vallecas, a fampisehoana an-kambana eo anelanelan'ny Sekoly Núñez de Arenas, ny orkestra Pequeñas Huellas (Turin) sy ny Manises Cultural Athenaeum (Valencia); Zazalahy sy zazavavy zato lahy nanao mozika mozika isan-karazany, ary hira vitsivitsy momba ny rap.
Ary tamin'ny marainan'ny faha-8, tamin'ny hetsika farany, niaraka tamin'ny fanehoana mariky ny maha-olona tsy fanoloran-tena, dia nanome aingam-panahy maimaimpoana amin'ny dihy sy ny fihirana fombafomba izy. Ao, amin'ny fomba Miakanjo, ny hira lalina ho an'ny fanafahana ny vehivavy dia teraka amin'ny feon'i Marian Galan (Vehivavy mandeha ny Fihavanana). Fiangaviana koa avy amin'ny vehivavy ho mpikarakara ny Mother Earth.
Ary koa amin'ny faran'ilay diabe
Nanatontosa hetsika ihany koa i Ekoatera ny andro nifaranan'ny martsa maneran-tany faha-2.
Teo ihany koa ny folklore Ekoatoriana, nitafy ny fitafiana solontenan'ny tendrombohitray, ny mpandihy izay misy sonia misy azy manao hoe "LET's MAKE PEACE, NOT VIOLENCE."
Ary… Farany, noho ny Fikambanana Colours for Peace of Italy, dia nasaina hitsidika ny fampiratiana sary hosodoko 120 namboarina ny ankizy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ireo mpifaninana.